Usoro ojiji - Carros.com
Banye dị ka onye na-ere ahịa Debanye aha dị ka onye na-ere ahịa
Ree ụgbọ ala gị
AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua na BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamas TheBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia na HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Indian Ocean TerritoryBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCanadaCape VerdeUgwu CaymanCentral African RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Keeling) IslandsColombiaComorosCongoCongo Democratic Democratic Of TheOhia CookCosta RicaCote d'Ivoire (Ivory Coast)Croatia (UK)CubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEtiopiaAla FalklandFaroe IslandsUgwu FijiFinlandFinlandFranceGuiana FrenchFrench PolynesiaMpaghara French Southern TerritoriesGabonGambia TheGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernsey na AlderneyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiNụrụ na McDonald IslandsHondurasHong Kong SARHungaryIcelandIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIzrelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea NorthKorea SouthKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgLuxembourgMacau SARMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaNwoke (Isle nke)Islands MarshallMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlands AntillesNetherlands TheNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorthern Mariana IslandsNorwayNorwayOmanPakistanPalauÓgbè Palestaịn biPanamaPapua ọhụrụ GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairn IslandPolandPortugalPuerto RicoQatarNzukọRomaniaRussiaRussiaRwandaSaint HelenaSaint Kitts na NevisSaint LuciaSaint Pierre na MiquelonSaint Vincent na GrenadinesSaint-BarthelemySaint-Martin (nke French)SamoaSan MarinoSao Tome na PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth AfricaSouth GeorgiaSouth SudanSpainSpainSpainSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard na Jan Mayen IslandsSwazilandSwedenSwitzerlandSwitzerlandSwitzerlandSiriaSiriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTokelauTongaTrinidad na TobagoTunisiatoro toroTurkmenistanObodo Turks na CaicosTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUnited States Minor IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVatican City State (Nsọ Lee)VenezuelaVietnamObodo Virgin (British)Obodo Virgin (US)Obodo Wallis na FutunaWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
Cinggba ụgwọ ụgbọ ala
Ụgbọ ala maka ire ere
Debanye aha dị ka onye na-ere ahịa
Usoro ndị a bụ nsụgharị dị mma, usoro ọrụ anyị na-emetụta na saịtị Bekee. Lee nsụgharị Bekee
1. Usoro ojiji
Site na ịbanye na weebụsaịtị na https://carros.com, ị kwenyere ka usoro a nke ọrụ, iwu na ụkpụrụ niile dabara adaba, ma kwenye na ọ bụ ọrụ gị maka ịkwado iwu mpaghara dị. Ọ bụrụ na ị kwenyeghị na nke ọ bụla n'ime okwu ndị a, a machibidoro gị iji ma ọ bụ ịnweta saịtị a. Ihe ndị dị na weebụsaịtị a na-echebe site na nwebisiinka na iwu ụghalaahia.
2. Jiri ikikere
E nyere ikikere iji weghaara otu ihe ahụ (ihe ọmụma ma ọ bụ ngwanrọ) n'obere oge na Carros.com maka ebe ị na-ahụ naanị ya. Nke a bụ inye ikike, ọ bụghị inyefe aha, ma n'okpuru ikikere a, ị gaghị enwe ike:
jiri ihe ndị ahụ maka nzube azụmahịa, ma ọ bụ maka ihe ngosi ọhaneze (azụmahịa ma ọ bụ na-abụghị nke azụmahịa);
gbalịa ịkọ ma ọ bụ megharịa engineer software ọ bụla dị na weebụsaịtị Carros.com;
wepu ihe ọ bụla nwebisiinka ma ọ bụ ọkwa ndị ọzọ nke ụlọ ọrụ; o
nyefee onye ọzọ ma ọ bụ gosipụta ihe na ihe nkesa ọ bụla.
Akwụkwọ ikike a ga-akwụsị na akpaghị aka ma ọ bụrụ na o megidere ihe mgbochi ọ bụla ma ọ bụ na Carros.com nwere ike ịkagbu ya n'oge ọ bụla. Mgbe ịchisịrị nlele nke ihe ndị a ma ọ bụ mgbe ị kwụsịrị akwụkwọ ikikere, ị ga-emerụ ihe ọ bụla ebudatara na ihe onwunwe gị, ma ọ bụ na kọmputa ma ọ bụ nke e bipụtara.
A na-enye ihe ndị dị na ebe nrụọrụ weebụ Carros.com "dị ka". Carros.com emeghị ikike ọ bụla, kwupụta ma ọ bụ gosipụta ya, ma denye ma jụ nkwenye ndị ọzọ niile, gụnyere, na-enweghị njedebe, akwụkwọ ikike ma ọ bụ ọnọdụ nke ahịa ahịa, ahụike maka otu nzube ma ọ bụ mmebi iwu nke ihe onwunwe ahụ. ọgụgụ isi ma ọ bụ mmebi iwu ọzọ. Tụkwasị na nke ahụ, Carros.com anaghị enye ikike ma ọ bụ mee ihe ọ bụla na-egosi na ọ bụ eziokwu, ma eleghị anya, ma ọ bụ ịdabere na iji ihe ndị ahụ na weebụsaịtị ma ọ bụ n'ihe metụtara ihe ndị dị otú ahụ ma ọ bụ na saịtị ọ bụla jikọtara na saịtị a.
N'okpuru ọnọdụ ọ bụla Carros.com ma ọ bụ ndị na-azụ ya ga-enwe ike ịdaba maka mbibi (gụnyere, n'etiti ndị ọzọ, mebiri emebi maka data ma ọ bụ uru, ma ọ bụ n'ihi nkwụsị ahịa) nke sitere na iji ma ọ bụ enweghị ike iji ihe ndị dị na Ụgbọ ala. .com website, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na Carros.com ma ọ bụ onye ọrụ ikike nke Carros.com amaralarị akwụkwọ ma ọ bụ ederede banyere omume nke mmebi ahụ. N'ihi na ụfọdụ ụlọikpe adịghị ekwe ka oke nkpa na njedebe ma ọ bụ njedebe nke ọrụ maka nkwụsị ma ọ bụ mmebi nsogbu, njedebe ndị a nwere ike ọ gaghị emetụta gị.
5. Eziokwu nke ihe
Ihe ndị na-egosi na weebụsaịtị Carros.com nwere ike ịgụnye ọrụ nchịkwa, mbipụta ihe odide ma ọ bụ foto. Carros.com adịghị ekwe nkwa na ihe ọ bụla n'ime ihe ndị dị na weebụsaịtị ya bụ eziokwu, zuru ezu maọbụ ugbu a. Carros.com nwere ike ime mgbanwe na ihe ndị dị na weebụsaịtị ya n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa. Otú ọ dị, Carros.com adịghị ebido imelite ihe ndị ahụ.
Carros.com adịghị enyocha niile saịtị ndị jikọtara na ebe nrụọrụ weebụ ya ma ọ bụghị ọrụ maka ọdịnaya nke saịtị ndị ahụ ejikọtara. Njikọ nke njikọ ọ bụla apụtaghị na nkwado nke Carros.com nke saịtị ahụ. Ojiji nke weebụsaịtị ọ bụla jikọtara ya n'ihe ize ndụ.
Carros.com nwere ike ịmegharị usoro okwu a maka ebe nrụọrụ weebụ gị n'oge ọ bụla na-enweghị ọkwa. Site n'iji weebụsaịtị a, ị kwenyere ịgbaso usoro nke ọrụ ndị a ugbu a.
8. Iwu gọọmentị
A na-achịkwa usoro na ọnọdụ ndị a ma jiri ya dịka iwu nke Connecticut na ị na-edo onwe gị n'okpuru ikike nke ụlọikpe nke obodo ahụ ma ọ bụ ọnọdụ.
Okwu a dị irè nke March 27, 2019.
Ugbo ala ala
Ogbe ndị a na-ere m nso
Arsgbọ ala site na koodu zip
Arsgbọ ala site na obodo
Debanye aha na ala anyị kwa ọnwa.
Mkpokọta ụgbọala na gwongworo
Twitter Usoro Nzuzo Usoro ojiji Kpọtụrụ anyị
© 2021 Carros.com. Ikike niile echekwara.